Mabhuku aRosa Montero, makumi mana emakore akanakisa mabhuku | Zvazvino Zvinyorwa
Rosa Montero. Mufananidzo © Patricia A. Llaneza
"Rosa Montero Libros" ndeimwe yekutsvaga kwakanyanya pawebhu. Pakati pemhedzisiro yakawanikwa panogona kuwanikwa mazita akakurumbira emunyori weMadrid mumakore makumi mana apfuura. Munyori akatanga muna 4 nenyaya yake Nhoroondo yekushungurudzika kwemoyo, iro basa panguva iyoyo rakashamisa mamiriro ekunyora kuSpain. Nekudaro, iyo posvo yakamukudza yaive Ndichakubata samambokadzi (1983), iro bhuku rakamuisa pane rakanyanya-kutengesa runyorwa kekutanga.
Montero ine basa rine zvibereko mune zvese zvinyorwa uye utapi venhau. Mune rake basa munyika yetsamba, akabudirira kubuditsa mabhuku gumi neshanu, 17 pfupi nyaya uye matanhatu mazita evana, iyo yaakapihwa mubairo kakawanda. Akasimukirawo mumunda wenhau, kwaakawana mibairo yakaita se: World Interview Award (1978) uye National Journalism Award (1981).
1 Ipfupi biography yaRosa Montero
1.1.1 Novels naRosa Monteros
2 Ongororo pfupi yemamwe mabhuku naRosa Montero
2.1 Makoronike e Heartbreak (1979)
2.2 Mwanasikana weCannibal (1997)
2.3 Nhoroondo yeiyo Transparent King (2005)
Ipfupi biography yaRosa Montero
Rosa María Montero Gayo akaberekerwa muMadrid muna Ndira 3, 1951, mwanasikana waAmalia Gayo naPascual Montero. Achiri mudiki, Rosa akaratidza kufarira kuverenga uye akakwanisa kunyora ake ekutanga mazano nenzira yakajeka. Pazera remakore gumi nemasere, akapinda muComplutense University yeMadrid nechinangwa chekudzidza psychology kuFakisheni yePhilosophy uye Tsamba., kunyangwe makore akazotevera akafunga kuchinja mabasa.
Kubva 1969 kusvika 1972, akatora makosi mana epfungwa pasangano rimwe chete, asi pakupedzisira akafunga kunyorera basa reJenali kuHigh School yeJenalian kuMadrid. Mugore rimwe chetero, akashanda mumidhiya dzakasiyana siyana, senge: Vanhu, Mukoma Wolf, Mafuremu uye Zvinogoneka. Akapedza basa rake muna 1975 uye kubva 1977 kusvika parizvino anoshanda ku Nyika.
Rosa Montero akakohwa basa rakabudirira rekunyora umo akaburitsa mabhuku 17 - kubva 1979 kusvika iyezvino-. Mazhinji emabasa aya amuita akakodzera mibairo yakakosha, senge:
Chii chekuverenga Mubairo webhuku rakanakisa (kaviri)
Madrid Vatsoropodzi Mubairo (2014)
National Zvinyorwa Mubairo (2017)
Saizvozvowo, munyori ndiye anogamuchira mibairo mizhinji yepasi rose, pakati payo zvinotevera kumira:
Chile Vatsoropodzi Circle Mubairo (1998 na1999)
Roman Primeur Mubairo kubva kuGaint-Emilion France (2006)
Peni yemunyori wemutambo yakatendera kuti izadzikiswe kuSpain, kunyangwe hazvo iri musika unonyanya kutungamirirwa nevarume. Kubudirira kwemanoveli ake kwakapfuura nyika nenyika, kuchishandurwa mumitauro makumi maviri uye yakashandurwa yemitambo, mafirimu mafupi uye kunyange opera. Saizvozvo, basa rake ndicho chinhu chekudzidza kutenderera pasirese, kutsikisa gumi nemaviri emabasa ane chekuita nemunyori uye anopfuura makumi mashanu emakopi akabatanidzwa ane kumwe kuongorora kwake.
Novels naRosa Monteros
Ongororo pfupi yemamwe mabhuku naRosa Montero
Makoronike ekushungurudzika kwemoyo (1979)
Ndiyo yekutanga runyorwa nemunyori Rosa Montero Mutambo wakagadzwa muSpain muma80s. Iyo rongero inoratidza chinzvimbo chechizvarwa chevakadzi vaive vakunda rusununguko rwakamirirwa kwenguva refu, asi vachiri vasingazive mabatiro avanofanira kuita.
Nyaya yacho yakanangana naAna, mutori wenhau wepepanhau rine mukurumbira uye ari kupinda munguva dzakaoma. Mushure mekuparadzaniswa naJuan, waakagara naye kwemakore matatu, anomanikidzwa kurera mwanakomana wake oga pakati pekuzvipira kwakanyanya kwebasa.
Iyo inoverengeka inoratidza kuomarara kwenzanga nemagariro kupokana: kunonoka kwenguva yeFranco uye nekuvandudza nguva nyowani. Icho chirongwa chekuratidzira - pakati pemitsara izere nekunzwisisa - pane nyaya, mamiriro uye kufungira izvo kunyangwe nanhasi, muzana ramakore reXXI, zvinokanganisa vakadzi vazhinji.
Chronicle yekusuwa kwemoyo ...
Ndiro rimwe remabasa anozivikanwa kwazvo emunyori wechiSpanish inoverengeka inotaurira chakavanzika chekutsakatika. Iyo zano rakagadzirirwa muSpain pakupera kwezana ramakore rechi2003. Kubva pakaburitswa bhuku iri, yaive budiriro yekutengesa, uyezve yakafanirwa nePrimavera Prize yenhau yekuSpain gore rimwe chete. Muna XNUMX, yakagadziriswa firimu naAntonio Serrano uye nyeredzi Cecilia Roth. Zvakare, Gina Monge akaendesa kuchikuva semutambo "Zviwanire iwe."
Iyo rangano inotanga nekuratidzwa kwevaviri vakaroora vanogara muMadrid, vakaumbwa nemunyori Lucía Romero naRamón Iruña, mukuru wemitero. Kunyangwe vanga vari pamwe chete kwemakore gumi, harusi rudo rwunovazivisa; kutaura zvazviri, zvinogona kutaurwa kuti vakabatana netsika. Kunyange zvakadaro, Vaviri vacho vanosarudza kutora mazuva mashoma voshanyira Vienna pakupera kwegore, asi chimwe chinhu chinoitika nguva pfupi vasati vatiza: Ramón anonyangarika pasina tsananguro.
Mushure mekutsvaga kwese kwendege, Lucía, azere tsinga, afunga kuenda kuimba yavo, uye kana asingawani mhinduro, anomanikidzwa kuudza kunyangarika kwacho kumapurisa. Mutikitivha anoita kuferefeta, asi panguva imwecheteyo munyori anotarisawo zvinongedzo. Kuti aite izvi, mukadzi anoshandisa rubatsiro rwemuvakidzani wake Felix - veteran anarchist - naAdrián - jaya risina ruzivo.
Sezvo yakaoma yekutevera maitiro anotanga, Lucia anoziva kuti anga achirarama manyepo akamupedza. Yatove yakajeka neichoicho, iye ari kuwana chivimbo maari uye zvakare anosarudza kubvunza nezve chaicho chikonzero chehupenyu.
Mwanasikana waCannibal ...
Iri ibhuku regumi rakaburitswa naRosa Montero. Iyo nhoroondo yenhoroondo inoitika muEurope yezana regumi nemaviri negumi nematatu emakore. Zano rakasimudzwa nemunyori rine simba rakakura uye rakagadzirirwa kuve chinyorwa chekare. Kunaka kwebasa kwakapa iro kusazivikanwa pakati pevadzidzi uye vaverengi, izvo zvakaribvumidza kuhwina mibairo ine mukurumbira, senge:
Chii chekuverenga Mubayiro 2005 yeakanakisa Spanish novel
Mandarache Mubayiro 2007
La Nhoroondo yeiyo Transparent King inotaurira mutambo wechidiki ane makore gumi neshanu anonzi Leola, anogara nekuzvininipisa munyika dzakanyura muhondo uye inotongwa nevarume vakaipisisa. Rimwe zuva, anoita sarudzo inozoshandura hupenyu hwake zvachose: kubvuta nhumbi kubva kumurwi akafa woishandisa kuti isazivikanwe.
Kubva ipapo odyssey inotanga, iyo inorondedzerwa mumunhu wekutanga naLeola pachake uye inoitika munzvimbo dzinoverengeka dzakakosha dzeMiddle Ages. Munguva yekuvandudzwa kwenyaya, vatambi vanoshamisa vanozobuda naiye wechidiki achararama nemitambo mikuru, pakati pavo "Nyneve" -aifungidzirwa muroyi-, uyo anozove shamwari yake mumaoko. Pakati pezviitiko zvake muFrance, protagonist inomhanyira muchirevo cheMambo Transparent, icho chinoratidzwa mumitsara yekupedzisira yebasa.
Nhoroondo yaMambo ...
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Type » Novela » Mabhuku aRosa Montero